Allgedo.com » 2012 » August » 07
Home » Archive Daily August 7th, 2012 Ciidamada dowladda TFG oo la wareegay deegaan 90 Km magaalada Kismaayo u jira. Aug 7, 2012 Ciidamada dowladda TFG oo kaashanaayay kuwa Kenya ayaa maanta ku siqay dhanka magaalada Kismaayo ee gobalka J/hoose, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta deegaan 90 KMG magaaladaasi u jira.
Ciidamadaan oo ahaa kuwii horay uga soo dhaqaaqay dhanka degmada Afmadoow ayaa maanta la sheegay inay weerareen deegaankaan ay qabsadeen oo Al-shabaab horay ay u joogeen, waxaana ciidanka Al-shabaab la sheegay... Dowladda Uganda oo saraakiil ka mid ah ciidamadeeda cirka usoo dirtay Soomaaliya. Aug 7, 2012 Dowlada Uganda ayaa ku dhawaaqday inay dalka soomaaliya usoo Dirtay 28 Sarkaal oo ka tirsan ciidamada Cirka e Dalka Uganda si ay uga Qayb Qaataan Sugida Amaanka Magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro Doorashada Madaxweynaha Dalka soomaaliya, waxaana ay ciidamadaan adeegsan doonaan diyaaradaha Dagaalka Gaar ahaan Helicopter kuwa loo yaqaano .
Saraakiisha Ciidamada difaaca Dalka Uganda General Aronda... C/laahi Axmed Caddoow “Hadii markaan doorashada la iiga guuleesto mar dambe iskuma soo sharixi doono madaxweyne inaan noqdo” Aug 7, 2012 Siyaasiga C/laahi Axmed Caddoow oo ka mid ah Musharaxiinta u taagan inay qabtaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta sheegay in mar kale aanu isku soo sharixi doonin xilkaasi hadii doorashada soo socta laga guuleesto.
Masuulkaan oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore uu ku guul dareestay inuu noqdo madaxweyne, markaanna uu tijaabinaayo nasiibkiisa... WAR DEG DEG:- Munaasabad uu isku soo sharaxaayo xilka madaxtinimo Ra’iisul wasaare C/weli Maxamed Cali oo Muqdisho ka socota. Aug 7, 2012 Munasabad balaaran oo uu xilka madaxtinimada isugu soo sharaxaayo ra’iisul wasaare C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa waxay ka socotaa Hotelka City ee magaalada Muqdisho.
Halka munaasabada ay ka dhaceyso waxaa ku sugan Mas’uuliyiin aad u badan, golaha wasiirada dowladda TFG, wakiilo ka kala socda Puntland, Gal-mudug, Ahlus-unna Waljameeca, Fanaaniin, aqoon yahano, iyo marti sharaf kale.
Waxaa... Madaxweynaha dowladda TFG oo xalay kulan casho ah la yeeshay saraakiisha dowladda kuwa AMISOM iyo qaar ka mid ah wasiiradda dowladda TFG (SAWIRO) Aug 7, 2012 Madaxweynaha dowladda TFG ayaa xalay kulan Casho ah waxa uu la qaatay xubno ka mid ah wasiirada, saraakiisha dowladda TFG iyo kuwa AMISOM, Maamulka gobalka Banaadir iyo xubno kale oo halkaasi lagu casuumay.
Kulankaan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid daba scoday dibad baxii shalay loogu dabaal degaayay xilligii Al-shabaab ay isaga baxeen magaalada Muqdisho,... Radio Allgedo/ Waraysiyo